DAAWO:- Hub lagu qabtay Sland, Boorame oo laga taageeray DFS, Musharax suaalo waydiiyay MD Madoobe, Khilaafka Puntland iyo DFS. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- Hub lagu qabtay Sland, Boorame oo laga taageeray DFS, Musharax suaalo waydiiyay MD Madoobe, Khilaafka Puntland iyo DFS.
Akhristayaasha ku xiran shabakadda caalamiga ah ee Marqaannews waxaanu idiin soo gudbinayaa warkii caalamka oo aan ugu tala galnay in habeen waliba xilliyadaan oo kale idiin kusoo gudbinayo qaab muuqaal ahaan dhamaan wararkii ugu waawaynaa ee ka dhacay guud ahaan dalka.
Caawa oo ah Sabti taariikhduna ay ku beegan tahay 20 July 2019 qodobada aad ku daawan doontaan warka caalamka waxaa kamid ah:- Hub lagu qabtay Sland, Boorame oo laga taageeray DFS, Musharax suaalo waydiiyay MD Axmed Madoobe, Khilaafka Puntland iyo DFS, Guddiga loo magacaabay Galmudug, IYO QODOBO KALE.
Previous articleQISO MURUGO LEH :Xaaskaygi Aduunka Ugu Jeclaa Iyo Dhimashadii Muqdisho Iloowi Waayey
Next articleDULAALINTA KENYA & ISDABAALINTA SOOMAALIDA.!!
Taajka Maakhir July 21, 2019 At 12:28 am
Isaaqu waxay ka mid yihiin beelaha Soomaaliyeed ee kooban ee haddii ay dhiig kala galaan aanay qasaasta aanooyinkaasu qarniyo dhammaanin. Colaaddan mar ba soo laba kacleysa sagaashameeyadii ay aanadeedu billaabmatay. Muddadaas oo dhammi waxaa aaggaas ka jiray wax lagu sheegayo “dawlad” iyo “qaran” oo haddana wax ay ka tartay aany jirin in ay sii huriso mooyaan ee. Nadaam dawladeed iyo mid dhaqameed midna lagu ma soo afjarin sidii looga baahnaa. Sabab?
Waa sababo dhowr ah aawadooda. Sababta gundhigga u ahi waxaa weeye in aanu meesha ka jirin lagu tilmaami karo in uu dawli ahaa bal se uu ahaa talis jabhadeed oo Isaaqa ku koobnaa, kaas oo ka sii daran ee ay reero ahaan ugu sii kala qaybsanaayeen. Kala qaybsanaantaas ayaa waxaa qaab khayaano lagu suntay loogu ekeysiiyay xisbiyo siyaasadeed oo isku “dawlad” ka tirsan. Wax ay qarsadeen oo qudhunsaday uun bay ku noqotay.
Iminka beentii la dhoodhoobayay iskeed bay iskugu dul burburaysaa oo aafaad hore leh ayay na ku sababaysaa inta geyigan wada deggan. Hub xad dhaaf ah oo jaa Woqooyi Galbeed dhoobnaa baa in kale lagu soo daabulayaa. Kharash xad dhaaf ah ayaa lagu khasaariyay oo ahaa deeqihii dadka saboolka ah loogu talagalay oo boob iyo dhac qaawan lagu dhacay. Hubkaas Soomaalida kale 28 sanadood loo keydsanayay ayay Isaaqu hadda in ay isku xasuuqaan ku sigan yihiin haddii aanay Eebbaheen iyo Soomaalidu kala qaboojinin.
Kuwa qarannimadii waxan oo dhibaatooyin ah lagaga bixi lahaa caqabada ku noqday ee u doodaya oo u dhimanaya jabhadeyntan belada iyo baaska isla Isaaqooda ku noqotay maxaa lagu tilmaami karaa toloow?
mingistume soo Dag July 21, 2019 At 12:52 am
Nin adduunya joogoow maxaa aragti kuu laaban?…
1)IIdoor” Daandaansi Badanaa Adkays Daranaa(Dagaal Markuu DhACO)(FOODA LA IS DARO)?
shalay waad ila arrin xumeed; xalayna waad ila orod …Xumeeyd)jeegaanta/SNM/FAQASH.
Ahmed July 21, 2019 At 2:17 am
Cismaan gartey oo isagu anuu rabaa inuu iska key dulkiciyo. Inkastoonan ku fadhiyin oon xitaa aan madaxa u salaaxo’e. Waa ciilan caadifadi dhaansatey oo rajo ma leh. Adiguse miyaad illowdey in aanu anagu qoodh nahay ood Sanad dhan aad noo hub iyo xooloba urursaneyseen ood hadana aad xitaa Tukaraq oo tuulo yar ah tahli weydeen inaad naga dhacsataan.kkkkk
Hadal kuuma banaana ee Islaanta Kaareheedii u guda damiirlaawayaashow.
Waayeel July 21, 2019 At 9:33 am
Asc somaali marya xuneey.
Wa odaygii aderkiin ahaa ee waayeel, su’al an idin weydiiye wax makala fa’idaan mise sheekadu madhaafto shimbiro ma cabaan iyo waa cabaan? Waxan waayey sadix nin oo somaali ah oo inta dood wadaagay danguud iskuwada raacay ama libin isu ogolaaday.
Macno mas sameynayso doodu hadaanan lakala gar heleeyn, waxanse layaabay intabadan dadka halkaan kudooda waa qurbojoog fursad uhelay ladhaqanka ummado kala duwan iyo micnaha wadaninimadu ledahay. Website walba o somaali leedahay doodu wa isku mid
Reero isku faanaya, kuwo isku dhaaranaya waxkala car raraya.
War dadku ma afka somaaliga ayey barteen oo somaaliba maahan?
Nin aanan geeridiisa maqal ba marku qof layaabo wuxuu oranjiray kaasi wa tacab khasaaray. Adinku hadaad saan tahiin kuwaad dhashaan tolow sidee bey noqo?
Mareykanka “Waa in doorashada waqtigeeda ku dhacdaa, iyadoo aanu jiri doonin...
DAAWO MUUQAAL:Laascaanood Oo La Keenay Dhaawaca Garaad Cabdisalaan iyo Caaqil San-yare,